Akụkọ - Anti-virus light jaket na-echebe ezinụlọ gị
Anti-virus light down jaket chebe ezinụlọ gị
Jaketị antimicrobial na antiviral na-agbadata jaket: nje ahụ bụ obere nje dị mfe nke nwere naanị otu ụdị nucleic acid (DNA ma ọ bụ RNA) nke ga-ebiriri n'ime sel lining wee gbasaa site na mmegharị. Ọ bụ ezie na nje dị mfe na nhazi na obere nha, ha nwere ike ime ka ndị mmadụ na osisi wee daa ọrịa ma gbuo ha. Dịka ọmụmaatụ, n'ime obere nje virus DNA, ụfọdụ na-ebute gastroenteritis na ụmụ mmadụ na ezì ọzọ, ebe ndị ọzọ na-eri nri elekere ụmụ mmadụ ma na-enweghị ike ịzụlite nje na-akpata onwe ha, mana site n'enyemaka nke adenovirus, nje virus ọzọ na-enye aka nke na-abanye tonsils.
Nje virus kachasị emetụta ụmụ mmadụ bụ influenza! Flu na-egbu ihe karịrị mmadụ 88,000 kwa afọ na China ， Ihe karịrị pasent 80 bụ ndị agadi karịrị afọ 60. A na-ebute nje virus influenza ọkachasị site na ụmụ irighiri mmiri ikuku, ịkpọtụrụ ndị nwere ike ịrịa na ndị butere ọrịa ahụ, ma ọ bụ ịkpọtụrụ ihe ndị merụrụ ahụ. General ọdịda oyi oge bụ elu-enwekarị oge, tumadi kpatara nje nke influenza a virus na influenza B virus .Okike ga-achọ ịgwa gị na ebumnuche mbụ nke ngwaahịa a bụ iji kpuchido ahụike nke ya na ezinụlọ ya.
Uwe nje antibacterial adịla oke ahịa n'ahịa ahụ, nnwale na nnwale nke nje na-adịtụ nro. Ọrịa ụlọ jiri nwayọ nwayọ kwụsị, mana na echiche nke abụọ, ngwaahịa a nwekwara mmetụta ụfọdụ na nje influenza nkịtị, ya mere ezitere nye onye obula, ihe a bu uzo ndi nne na nna, ihe nlere anya. Enwere m olile anya na uwa nile nwere ike ibi n'udo ma nwekwaa oria na ọdachi
Jacketdị jaket a dị arọ dị mma maka ọtụtụ afọ, ọ ga-eyi ma ụmụaka ma ndị okenye. Enwere ike iji ya dị ka uwe nne na nna ma ọ bụ di na nwunye iji mee ka ezinụlọ gị dịkwuo ọkụ ma na-akpachi anya.